Ugwayi onama-flavour capsules uthandwa ngabantu abasha ngenxa yokusebenzisana, kanye nentsha yokubhema ugwayi onama-flavour amabili.
I-Shijiazhuang Dayang Bioengineering Co., Ltd. ithuthukisa imikhiqizo emisha muva nje.
Kuyamangalisa! “Isimiso” Ugwayi Udumile Manje!
Awuphazami, ugwayi ubuye udle ugwayi wezempilo, onamaphilisi. Ake ngikubonise “i-capsule”, okuwuhlalu oluwuketshezi oluncane oluqukethwe kusihlungi sikagwayi. Obhemayo udinga kuphela ukuncinza ubuhlalu ukuze akhiphe uketshezi kubuhlalu futhi avumele ukunambitheka kushunqe...
Imikhiqizo Emisha Ngogwayi!
Njengoba wonke umuntu azi ukuthi ukubhema kungakhiqiza izinto eziyingozi futhi kulimaze umzimba womuntu. Isihlungi sikagwayi sisetshenziselwa ukunciphisa intuthu, itiyela kanye nezinhlayiya ezimisiwe ezikhiqizwa ngesikhathi sokusha lapho ubhema. Kodwa isihlungi kugwayi asikwazi ukuhlunga ngokuphelele izinto eziyingozi kugwayi...
Ikhondomu wuhlobo lwemikhiqizo yokunakekelwa kwezempilo yocansi evimbela ukukhulelwa ngendlela engeyona isidakamizwa.
Isetshenziselwa kakhulu ukuvimbela ukuhlangana kwesidoda namaqanda omuntu ngesikhathi sokuya ocansini, ukuvimbela ukukhulelwa kanye nokunciphisa ingozi yezifo ezithathelwana ngocansi njenge-gonorrhea ne-HIV, futhi ngokuvamile yenziwa ngerabha yemvelo noma i-polyurethane. Okwethu okukhona...